अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको कोरोना भ्याक्सिनले सफलता पाउला? « Asia Sanchar : Nepal News Live
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको कोरोना भ्याक्सिनले सफलता पाउला?
जीएनएन, लण्डन, १२ कात्तिक – बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्दै आएको कोरोना भ्याक्सिनले सफलता प्राप्त गर्ने संकेत मिलेको छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले जनाएअनुसार उसले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनले मानिसमा प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाऊने गरेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि पहिलो चरणमा परीक्षण गरिएको भ्याक्सिनले बढाऊने गरेको प्रतिरक्षात्मक क्षमताको नतिजा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।